Mahagndayon ကျောင်းတိုက် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
Kyauktawgyi စေတီတော် →
Mahagndayon ကျောင်းတိုက် အမရပူရအတွက်, မန္တလေး (ထို့အပြင်ထို့ပြင်မဟာ Gandar Yone ကျောင်းတိုက်သို့မဟုတ် Mahagandhayon ကျောင်းတိုက်စာလုံးပေါင်း) ပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ 1910 နှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးလူသိများဘုန်းတော်ကြီးသင်ကောလိပ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပေါ်မှာထိုင် 20 မနီးမဝေးသည့်ဦးပိန်တံတားကနေ Taungthaman ရေကန်၏အနောက်တိုင်းဘဏ်အပေါ်တည်ရှိပြီးဧက.
ဗဟိုရှုပ်ထွေးန်းကျင်တစ်ဦးကလမ်းလျှောက်သင် quatrers နထေိုငျဘုန်းကြီးများကိုပြသပါလိမ့်မယ်, ကျောင်းမှာဒေသများ, အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံများနှင့်အဓိကထမင်းစားခန်းခန်းမ. အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်းအပါအဝင်အခြားအဆောက်အဦးများနှင့်အတူမြောက်မြားစွာသေးငယ်တဲ့ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားပုထိုးစေတီအတူတက်သတ်မှတ်, ဆေးခန်း, စာကြည့်တိုက်, ဟောပြောပွဲခန်းမ, ကွန်ပြူတာခန်း, ဧည့်သည်ခန်းနှင့်တစ်ဦးအရာ၌ခန့်ခန်းမ.
ဤသည်သံဃာတော်များနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဘာဝနာနှင့်စာဖတ်ခြင်းနဲ့တူကျောင်းသင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူဗုဒ္ဓဘာသာသွန်သင်ချက်နှင့်ကျမ်းကိုသင်ယူတဲ့သင်ကြားမှုဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ပါသည်, စာအရေးအသား, ဘာသာစကားများစသည်တို့ကို. အတော်များများမိသားစုများအနေနဲ့ပညာရေးရဖို့အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအဖြစ်တစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်၏သားတို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်. ဒါဟာဘဝတွေအတွက်ဘုန်းတော်ကြီးဆက်လက်ရှိနေရန်မဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူး. တချို့ကအခြားသူများကိုနှစ်ပေါင်းနေဖို့ပါလိမ့်မယ်သာလအနည်းငယ်နေဖို့ပါလိမ့်မယ်.
သူတို့အားလုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအပေါ်မူတည်ဒါတစ်ဦးကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောလုပ်ခအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်. Mahagandayon ဘုန်းကြီးကျောင်းရန်ပုံငွေလှူဒါန်းမှုနှင့်ဆန်၏ကြီးမားသောအိတ်ထောက်ပံ့သူအများအပြားဒေသခံများအားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်, သံဃာတော်တွေ upkeep နှင့်နေ့စဉ်စားသောက်အဘို့အမဲသားကိုနှင့် vegtables. အလှူငွေပါစေသောသူတို့ကိုသံဃာတော်တွေဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အစားအစာများကိုအမှုဆောင်များ၏ privledge ပေးထားကြသည်.
သံဃာတော်များရာချီသူတို့ရဲ့တွင်နေ့လည်စာမုန့်ညက်တက်သည်တန်းစီအဖြစ် Mahagandayon ကျောင်းတိုက်နှောင်းပိုင်းနံနက်ယံ၌ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားဧည့်နှင့်အတူအလွန်လူစည်ကားရနိုင်. သင်သည်သူတို့၏မုန့်ညက်ထိုနေ့၌ဘုန်းတော်ကြီးများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ doners အဘို့ဖြစ်၏ပေးသောသီးခြားထမင်းစားခန်းတွေ့နိုင်ပါသည်အဓိကထမင်းစားခန်းခန်း၏နောက်ကျောကိုထုတ်. ဒီအဆောက်အဦရဲ့နောက်ကွယ်မှာသင်ဒေသခံတွေအခြားသူတွေနေတုန်းဟင်းသီးဟင်းရွက်တက်ခုတ်အလုပ်များနေသောအဓိကမီးဖိုချောင်နေ့စဉ်အစားအစာများချက်ပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြီးမားသောအိုးကင်းမှမတက်ရောက်နေကြသည်သွားနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
အချို့သောဘုန်းကြီးတွေဟာ chat ပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါလျှင်အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်, သူတို့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်လို.
အဆိုပါ fint ဖို့ Google ကမြေပုံရည်ညွှန်း Mahagndayon ကျောင်းတိုက် အမရပူရအတွက် – Google Maps ကို
တစ်ကိုးကွယ်မှု Bhuddist တိုင်းပြည်အဖြစ်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်ပြည့်ဝ၏နှင့် Mahagandayon ကျောင်းတိုက်သူတို့ရဲ့ဘဝပုံမှန်လမ်းထဲသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့ရန်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
Posted in, အမရပူရ	permalink